Lafrantsa sy Etazonia : Mpanao didy jadona -
AccueilRaharaham-pirenenaLafrantsa sy Etazonia : Mpanao didy jadona
Navoakan’ny C.E.S ny lisitr’ireo kandidà filoham-pirenena ny faha-03 Mey 2013 araka ny fanapahan-kevitra n°01-CES/D ny 3 Mey 2013, ka niisa 41 ireo mpihazakazaka. Tsy neken’ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena anefa ny fisian’ireo kandida telo, dia ny amiraly Didier Ratsiraka, Lalao Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Ry zareo Amerikana sy Frantsay no tena niziriziry tamin’ny fisakanana ireto kandidà telo ireto, indrindra fa i Etazonia izay tsy nanaiky ny filatsahan-kofidian’i Andry Rajoelina noho ity farany nanongam-panjakana. Voatery nandray fanapahan-kevitra fanindroany ny C.E.S ka namoaka izany araka ny fanapahan-kevitra n°08-CES/D du 17 Aogositra 2013, izay nanafoana ny filatsahan-kofidian’ny amiraly Didier Ratsiraka, Lalao Ravalomanana ary Andry Rajoelina niampy kandidà dimy hafa. Izao indray anefa toa manery ny Malagasy hanaiky izay kandidà rehetra te hilatsaka ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena, indrindra ny Frantsay sy ny Amerikana.
Efa noresahina teto ihany ity resaka fahafahana na tsia hilatsaka ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena ity (vakio Triatra nivoaka tamin’ny 7 Septambra 2017), izay nitaterana ny voalazan’ireo andininy vitsivitsy voarakitra ao amin’ny Sata mifehy ny Vondrona Afrikana natao tany Addis-Abeba ny faha-30 Janoary 2007 hita ao amin’ny « chapitre III » andininy faha-3 toko faha-10 izay manohitra tanteraka ny fanonganam-panjakana, ary ny toko faha-9 izay manohitra ihany koa ny kolikoly, ny fandikan-dalàna, ary ny « tsimatimanota ». Voalaza ao amin’ny « chapitre VIII », andininy faha-23 toko faha-4 kosa ny sazy ho an’ireo izay naka fanjakana tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana araka izao manaraka izao « Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat ». Mbola nohamafisin’ny fifanarahana natao tany Cotonou ao amin’ny andininy faha-96 ihany koa anefa izany resaka fakana fahefana tsy araka ny fomba demôkratika izany.
Tery vay manta
Fifanarahana iraisam-pirenena ireo voalaza rehetra ireo fa tsy lalàna noforonin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny antoko HVM. Mazava araka ireo andininy maromaro ireo fa tsy mahazo milatsaka hofidiana filoham-pirenena intsony ireo rehetra nanongam-panjakana, nanao kolikoly, nandika lalàna sy izay rehetra fandikan-dalàna. Etazonia sy Frantsa no anisan’ny firenena milaza ho sarotiny mafy tokoa, ary tena mpanameloka izany fanonganam-panjakana izany. Ireto firenen-dehibe roa ireto ihany koa no mpiventy ny atao hoe tany tan-dalàna sy ny demôkrasia. Ankehitriny anefa izy ireo no mampihatra jadona amin’ny fanerena ny Malagasy handika tsotra izao ny voalazan’ireo fifanarahana iraisam-pirenena roa (Sata mifehy ny Vondrona Afrikana sy Cotonou) izay nosoniavin’i Madagasikara. Izany no atao hoe jadona sy fanaovana tery vay manta.
Manaiky ny fanonganam-panjakana indray ve izany i Etazonia sy Frantsa kanefa ny governemanta amerikana mihitsy no nanameloka ny zava-nitranga tetsy amin’ny “episcopat” Antanimena ny taona 2009, rehefa niharan’ny herisetra ny ambasadaoro Niels Marquardt? Manaiky ny halatra sy ny fanodinkodinam-bolam-panjakana indray koa ve izany ny governemanta amerikana sy frantsay? Mitsipaka ny atao hoe tany tan-dalàna indray koa ve izany i Lafrantsa sy Etazonia ka manaiky ny filatsahan-kofidiana olona efa nomelohan’ny Fitsarana?